Rogaska Slatina - Olim, Jelenov Greben အတွက်သမင်ခြံ
ဥရောပ ဆလိုဗေးနီး Rogaska Slatina
နေရပ်လိပ်စာ: Olimje 90, 3254 Podčetrtek, ဆလိုဗေးနီး;
ဖုန်းနံပါတ်: +386 3582 92 91;
08:00 ကနေ 18:00 ဖို့နေ့တိုင်း: နာရီဖွင့်လှစ်။
နာမည်ကျော်အပူအနီးရှိ ဆလိုဗေးနီးအတွက်အပန်းဖြေ Rogaska Slatina သမင်ခြံ - အံ့သြဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူမသည်ခရီးသွားများအများဆုံးအစစ်အမှန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမင်မြင်လျက်မြင်လျက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အစာကျွေးဖို့မလှယျကူနိုငျသညျ။ တိရိစ္ဆာန်များကိုဖွင့်မြေပြင်အနေအထားတွင်လွတ်လပ်စွာကျက်စားများနှင့်ကြာမြင့်စွာကလူလေ့။ ထို့ကြောင့်, ဆိုက်ရောက်ပေါ်ရှိ "ဧည့်သည်များ" တစ်ချိန်ကလယ်ယာမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အပြေးလာလိမ့်မည်ဟုကိုပြင်ဆင်ရပါမည်။
သမင်ဒရယ်လယ်ယာ Olim အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကဘာလဲ?
Olim အတွက်သမင်ခြံ - ဤအလွရာအရပျ, ဟောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းအနီး Terms Olimia ၏သေးငယ်တဲ့မြို့မှာတည်ရှိပြီး။ အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းကိုနှင့်အတူတစ်ကုန်းပေါ်မှာဖှဲ့စညျးလယ်ယာ။ ဒါဟာသမင်ဒရယ်မသာကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရုံလမ်းလျှောက် ယူ. , တချို့လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေရ။ သမင်ခြံ - ကိုအကောင်းဆုံးများထဲမှ လိုဗေးနီးယား၏ဆွဲဆောင်မှု မိသားစုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော။
ကလေးများအနီးအနားမှာစားကျက်ငြိမ်းချမ်းစွာ, ယဉ်သမင်ဒရယ်သဖြင့်နှစ်သက်သောနှင့်, အံ့သြဖွယ်သဘာဝအနေဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပါလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းများလယ်မြေတိရိစ္ဆာန် ယူ. သူတို့ကိုမင်ပြုမူဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ သင်ကမျက်စိတမှိတ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုသေချာစေရန်ပြင်ဆင်မှသာလိုအပ်ပါတယ်။
ဒါဟာရေပူနှင့်အတူရေသာသနာအပါအဝင်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်လယ်ယာ, ပေါ်မှာရှိသမျှသာယာအဆင်ပြေမှုများရှိနေသည်။ ဧည့်သည်များလိုဗေးနီးယမျးအစားအစာတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ပျူငှါနွေးထွေးသောစားသောက်ဆိုင်, ဒေသခံဝိုင်နှင့်ဒိန်ခဲထဲမှာစားသောက်နိုင်ပါတယ်။ အမဲသားကိုလည်း menu ပေါ်တွင်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါထုတ်ကုန်လယ်မြေပေါ်ပွင့်လင်း, ဆိုင်အတွင်းဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေး cranberry နှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင်ထုတ်လုပ်ချယ်ရီ liqueur, ပျားရည်, အရသာဝက်အူချောင်းနှင့်ဒိန်ခဲများပါဝင်သည်။ အဆိုပါအချိုပွဲထံမှကြောပိတ်ဆို့မှုအမျိုးမျိုးပေါ်အိုးတလုံးကိုဝယ်ခြင်းငှါထိုက်သည်။
့. , သင်တက်ကြွစွာပြင်ပရေးရာမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, မြှားပစ်, တင်းနစ်သို့မဟုတ်ကြက်တောင်တစ်ဂိမ်း။ သင်တို့သည်လည်းလှပထုတ်ကုန်ကိုပြသရာတစ်ပူဖောင်းအတွက်တက်သွားဒါမှမဟုတ်အိုးသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကလေးများသူတို့တစ်တွေပျော်စရာအချိန်ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအထူးဧရိယာရှိသည်။
တစ်ဦး reindeer ပါလယ်ယာမှတစ်ဦးအလည်အပတ် - တစ်ဦးမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံ, သငျသညျကို Santa Claus နှင့်အတူခရစ္စမတ်ကတ်ကိုအပေါ်တိရိစ္ဆာန်များ, မိတ်ဆွေများတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အကြောင်းမူကား, အတွက်အားလပ်ရက် Terms Olimia လိုဗေးနီးယားနှင့်၎င်း၏အစဉ်အလာ၏သဘောသဘာဝနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရအသစ်အတှေ့အကွုံမြား, အခွင့်အလမ်းများပုံမှန်အတိုင်းများစွာသောထံမှအခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသည်။ လယ်ယာပိုင်ရှင်များဆုနှင့်အတူအနီးအနားမှာဆွဲဆောင်မှု, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိမှလေ့လာရေးခရီးစည်းရုံး။ အဓိကအခွအေနေ - အုပ်စု၏အရွယ်အစား 10 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောလူဖြစ်ရပါမည်။
အဆိုပါလယ်ယာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါထုတ်ကုန်ဝယ်တရားဝင် site ပေါ်တွင်နေထိုင်။ ဤမြို့မှလွတ်မြောက်ရန်လိုသူမည်သူမဆိုများအတွက်အခန်းတစ်ခန်းရှိကွောငျးဒါသမင်တစ်ဦးနွားနှင့်အတူ Farmstead, မြို့ကနေပဲ 4.5 ကီလိုမီတာနဲ့ 8 ဟက်တာယူထားသော။
သမင်ခြံ, ရာ၏လိပ်စာ Olim ကဲ့သို့အသံ လိုဗေးနီးယား , အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်ရောက်ရှိရန်မျှမျှတတလွယ်ကူသည်သောတည်နေရာ, အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာချက်ချင်းဝနျးကငျြမှာတည်ရှိပါတယ် Rogaska Slatina ၏မြို့ကနေရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ထံမှသွားလာနေလျှင် Ljubljana , အကွာအဝေးအကြောင်းကို 120 ကီလိုမီတာရှိလိမ့်မည်, ဘတ်စ်ကားအားဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
အဘယ်အရာကို 1 နေ့အဘို့ဂျန့်မြို့မှာအတွက်ကြည့်ရှုသလော
ကဒ် CityCard Genting
စိန့်က Nicholas ၏ဘုရားကျောင်း (Kotor)
သဘောသဘာဝအပေါ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဓာတ်ပုံ session တစ်ခု
ခရစ် Pratt ဆယ်ကျော်သက်စင်တာဒန် Pratt သတိရအောက်မေ့တဲ့နာယကဖြစ်လာခဲ့သည်
Semolina နှင့်အတူ zucchini ၏ Fritters
Feng Shui ၏ပန်းချီကားများ
Halle Berry နဲ့အသစ်တခုဆံပင်ညှပ်လုပ်